चुनाव नजिकिँदै जाँदा भरतपुरमा रेनु दाहाल बलियो कि विजय सुवेदी? :: सन्जिब बगाले :: Setopati
भरतपुरका २९ वटा वडाका २४२ मतदातासँगको कुराकानीमा आधारित विश्लेषण
भरतपुर, वैशाख २५
राजेश घिमिरे भरतपुर, वैशाख २५
जगन्नाथ पौडेल, रेनु दाहाल र विजय सुवेदी
भरतपुर महानगरपालिका-१५, मंगलपुरमा दुई महिला सँगै भेटिए। हामीले आसन्न स्थानीय चुनावबारे सोध्यौं। उनीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल र एमालेका विजय सुवेदीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताए।
'कांग्रेसको उम्मेदवार छैन, यसपालि उनीहरूकै मत जितहारमा निर्णायक हुने होला?' हामीले यति भन्न नपाउँदै दुईमध्ये एक महिलाले रेनु दाहाल कांग्रेससहित पाँचदलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएको बताइन्।
जसले हामीलाई यो जवाफ दिएकी थिइन्, उनी कांग्रेसकी क्रियाशील सदस्य लीला अधिकारी रहिछन्। उनीसँगै रहेकी बेलकुमारी थापा भने एमाले समर्थक रहिछन्। लीलाको भनाइ भुइँमा झर्न नपाउँदै बेलकुमारीले भनिन्, 'एमालेले बूढाबूढीलाई वृद्ध भत्ता दिएको छ। त्यसैले पनि मलाई त एमाले मनपर्छ।'
उनले अगाडि भनिन्, 'यसपटक त मैले एमालेकै राम्रो देखेको छु। कसले जित्छ भन्ने त मत गनेपछि नै थाहा होला।'
चितवनको भरतपुरमा गर्मी जसरी बढेको छ, राजनीतिक माहोल त्योभन्दा धेरै तात्तिएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल एकातिर छन् भने अर्कातिर एमाले र राप्रपाको गठबन्धनबाट एमालेका विजय सुवेदी मेयरमा उठेका छन्।
यी दुई जनाको टक्करबीच कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल भरतपुरको निर्वाचनमा महत्वपूर्ण फ्याक्टर हुन्। पौडेलले कांग्रेसबाट रेनु दाहाललाई जाने भोट कति काट्छन् भन्ने नै उनको जितहारमा मुख्य आधार बनेको छ।
हामीले भरतपुरका २९ वटै वडाका २४२ जना मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटेर अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेका मुख्य उम्मेदवारहरूबारे उनीहरूका धारणा सोधेका छौं। यस क्रममा हामीले जुगेडी, रामनगर, नारायणगढ, भरतपुर, शरदपुर, कृष्णपुर, मंगलपुर, रामपुर, चनौली, मेघौली, तोरीखेत, पटिहानी, गौरीगञ्ज, शुक्रनगर, गुञ्जनगर, चम्पाननगर, पकोडी लगायत ठाउँमा पुगेर त्यहाँका मतदातासँग कुराकानी गर्‍यौं।
उनीहरूलाई हामीले अघिल्लोचोटि कसलाई भोट हाल्नुभयो र यसपालि कसलाई हाल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्‍यौं। कांग्रेसको उम्मेदवार कोही नभए पनि कांग्रेसका बागी उम्मेदवारले यो चुनावमा कस्तो प्रभाव पार्लान् भनेर पनि सोध्यौं।
हामीले कुराकानी गरेका २४२ जना मतदातामध्ये सबभन्दा धेरै ६५ जना अर्थात २७ प्रतिशतले रेनुलाई मत दिन्छौं भने। रेनुको अत्यन्त निकटमा एमालेका विजय छन्। उनलाई ५७ जना अर्थात २३ प्रतिशतले मत दिन्छु भने।
कांग्रेसका बागी उमेदवार जगन्नाथ पौडेललाई २३ जना अर्थात ९ प्रतिशतले मत दिने बताए। विवेकशील साझाका प्रविण काफ्लेलाई मत दिन्छु भन्ने एक जना पनि भेटिएनन्। त्यस्तै, अहिलेसम्म कसलाई मत दिने भनेर ९७ जनाले निर्णय गरिनसकेको बताए। यी अनिर्णितमध्ये बहुसंख्यकले आफूहरू कांग्रेसी भएको खुलाएका छन्।
अनिर्णित मतदाताहरूले अन्तिम समयमा कसलाई मत दिन्छन्, त्यसले निर्वाचनको परिणाम निर्धारण गर्नेछ। चितवनको चुनावमा एमाले मतदाता अनिर्णित रहने सम्भावना कम छ। त्यसैले यी अनिर्णितमध्ये बहुमतले एमालेलाई मत दिने सम्भावना पनि अतिकम हुन्छ।
अनिर्णित कांग्रेसी मतदातामध्ये धेरैले रेनुलाई मत दिने निर्णय गरे भने उनलाई जित निकाल्न सहज हुनेछ। जगन्नाथको पक्षमा अहिले थोरै र पाका कांग्रेसीहरू मात्रै खुलेकाले त्यो सम्भावनातर्फ संकेत गर्छ।
जगन्नाथको पक्षमा खुलेका २३ जनामध्ये अधिकांश ५० वर्षभन्दा माथिका छन्। उनीहरूमध्ये ८ जनाले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार नहुँदा पनि रूखमै भोट हालेको बताए। त्यो बेला माओवादी केन्द्रलाई भोट दिएको तर यसपालि जगन्नाथलाई भोट दिन्छु भन्नेहरू तीन जना मात्रै भेटिए। बाँकीले भने जगन्नाथलाई भोट दिन्छु भने तर अरू कुरा खुलाएनन्।
कांग्रेसबाट एमालेका विजय सुवेदीलाई जाने मत एकदमै कम पाइयो। हामीले कुराकानी गरेका कांग्रेस समर्थकमध्ये तीन जनाले मात्र एमालेका विजय सुवेदीलाई भोट हाल्ने बताए।
हामीले मतदातासँग कुराकानी गर्दा जो-जो कांग्रेस समर्थकले जगन्नाथलाई भोट दिन्छु भने, उनीहरूले एकै प्रश्नमा आफ्नो जवाफ सुनाए। तर रेनुलाई भोट दिन्छु भन्नेले केही बेरको कुराकानीपछि मात्रै आफ्नो राय दिए।
रेनुलाई मत दिन्छु भन्ने ६५ मध्ये आफूहरू कांग्रेस भएको बताउने २२ जना छन्। रेनुका पक्षमा खुलेका ३१ जनाले आफू माओवादी भएको बताए भने १२ जनाले आफू स्वतन्त्र रहेको तर रेनुलाई भोट दिने बताए। रेनुलाई मत दिन्छु भन्ने १३ जनाले आफूहरूले पहिलोपटक मत दिन लागेको बताए।
एमालेका विजय सुवेदीलाई मत दिन्छु भन्ने ५७ मध्ये ४५ जना एमाले समर्थक हुन् भने चार जना राप्रपा समर्थक छन्। त्यस्तै, दुई जनाले पहिला माओवादीलाई मत दिएको र अहिले एमाले रोजेको बताए। तीन जना भने कांग्रेस समर्थक छन्।
निर्णय गर्न नसकेका कतिपय कांग्रेसी मतदाताले आफूहरू रनभुल्लमा रहेको बताए।
'हाम्रो उम्मेदवार छैन तर कांग्रेस नेता भने उठेका छन्। उनलाई भोट दिएर पनि जित्दैनन् होला। अघिल्लोपटक रेनुलाई मत हालेको हो,' वडा नम्बर ३ मा भेटिएका एक कांग्रेस समर्थकले भने, 'एमालेले आफू हार्ने भयो भने जगन्नाथ दाइलाई पो हाल्दिन्छन् कि। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भोट उहाँलाई जान्छ। नत्र त रेनुलाई नै दिने त होला।'
भरतपुर महानगरपालिका-२६, मिलन चोकका कांग्रेस कार्यकर्ता भने पाँचदलीय गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट सुनिए।
उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सबभन्दा धेरै असन्तुष्ट छन्। त्यसैले यसपालि बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई समर्थन गर्ने उनले बताए।
'हामीले अघिल्लोपटक रूखमा भोट हाल्न पाएनौं। यसपालि पनि भोट हाल्ने ठाउँ पाइँदैन कि भन्ने लागेको थियो तर जगन्नाथ पौडेल उठेर त्यो ठाउँ पाइयो,' उनले भने, 'हामी देउवा हेरेर नेपाली कांग्रेस भएको होइन। त्यसैले उनले जसलाई भन्यो उसलाई भोट हाल्न बाध्य छैनौं। हामी त कांग्रेस जोगाउन जगन्नाथ पौडेललाई भोट दिन्छौं।'
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनप्रति मतदातामा जति असन्तुष्टि छ, त्यो एमाले-राप्रपा गठबन्धनमा छैन। एमाले उम्मेदवार विजय सुवेदीका लागि यो फाइदाको कुरा हो।
मेघौलीमा हामीले एमाले समर्थक र राप्रपा समर्थक दुई महिला भेट्यौं। उनीहरू दुवै जना आफ्नो गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन लागिपरेका छन्। यसअघिका निर्वाचनमा आफूहरूको मनमुटाव हुने गरेको दुवैले स्विकारे।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता गठबन्धनको पक्षमा माहोल बनाउन लागिरहेका छन् भने जगन्नाथले पनि उत्तिकै सक्रियता बढाएका छन्। यसपटक सबैजसो वडामा गठबन्धनका दलहरूले मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन्।समस्या भएका ठाउँमा समेत मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। यसले रेनुलाई फाइदा पुग्न सक्छ। अर्कातर्फ रेनुले आफ्नो व्यक्तिगत मत पनि राम्रैसँग बढाएको मतदाताहरूसँगको कुराकानीबाट बुझिन्छ।
हामीले स्थलगत भ्रमण क्रममा दुई जना यस्ता कांग्रेस समर्थक पनि भेट्यौं जो अहिलेसम्म गठबन्धनको र्‍यालीमा हिँडिरहेका छन् तर चुनावको दिन जगन्नाथलाई भोट दिन्छु भन्छन्। उनीहरूले यसपटक अरू सबै भोट गठबन्धनका उम्मेदवारलाई दिए पनि मेयरको भोट जगन्नाथलाई दिने बताए। उनीहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि रूखमै भोट दिएका रहेछन्।
यहाँका कांग्रेस कार्यकर्ताहरू माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को पछिल्लो भाषणबाट थप आक्रोशित पनि बनेका छन्। गठबन्धनका रेनु दाहाललाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति धम्कीपूर्ण भएको वडा नम्बर १० मा भेटिएका एक कांग्रेस समर्थकले बताए।
कतिपय कांग्रेसी समर्थकलाई भने हरेकपटक माओवादीलाई भोट हाल्दा आफूहरूको अस्तित्व गुम्ने पो हो कि भन्ने डर छ।
रेनु दाहालका लागि कतिपय पक्ष पहिलाभन्दा सहज छ भने कतिपय अप्ठ्यारो पनि छ। अघिल्लोचोटिको चुनावमा रेनु नयाँ थिइन्। अहिले उनले भरतपुर बुझेकी छन्।
'रेनु दाहाललाई पहिला अधिकांशले चिनेका थिएनन्। त्यस्तो बेला त जितिन् भने अहिले उनले यहीँ पाँच वर्ष बिताइसकिन्,' नारायणगढ बेलचोकमा भेटिएका एक व्यवसायीले भने, 'अहिले गठबन्धनसमेत भएकाले उनलाई सजिलो हुनसक्छ।'
खासगरी पश्चिम चितवनमा उनले गरेका कामको मतदाताहरू खुलेर प्रशंसा गर्छन्। पहिले आफ्नो घरअगाडि धूलोले हैरान पार्ने गरेकोमा अहिले बाटो कालोपत्रे भएपछि सजिलो भएको उनीहरूको अनुभव छ।
माओवादी केन्द्रभित्रै पनि गुनासाहरू छन्। रेनुका कारण आफूहरूले चितवनमा अवसर नपाउने हो कि भन्ने उनीहरूलाई भय छ।
यसरी विभिन्न कारणले रेनु र पाँचदलीय गठबन्धनसँग असन्तुष्ट र स्वतन्त्र मतदाताहरूलाई आफूतिर तान्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ एमालेले। यसका लागि एमाले कार्यकर्ताहरू कम्मर कसेर लागेका छन्। विजय सुवेदीको व्यक्तित्वले पनि यसमा सघाउ पुर्‍याइरहेको छ। हामीले भेटेका मतदाताहरू कसैले पनि उनको आलोचना गरेको भेटिएन। उनको छविले पनि केही भोट बढ्ने देखिन्छ।
'म त स्वतन्त्र हो। कुनै पार्टीमा लागेर हिँडेको छैन। आफ्नो काम गरेर खान्छु,' भरतपुर-२ का एक मतदाताले भने, 'विजयलाई भोट दियो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। म उहाँलाई नै भोट दिन्छु।'
यति हुँदाहुँदै एमालेभित्रको असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एमालेभित्रको पूर्व माधव नेपाल समूहले आफूहरू पार्टीमा अन्यायमा परेको गुनासो गर्छन्। यसले चुनावमा पनि असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
यसपालि चुनावको आकलन गर्दा पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा के भएको थियो भन्ने तथ्यांक पनि महत्वपूर्ण छ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा रेनु दाहाल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनेकी थिइन्। त्यो बेला कांग्रेसबाट कोही बागी उम्मेदवार थिएनन्। रेनु झिनो मतअन्तरले विजयी भइन्।
गत निर्वाचनमा भरतपुरका २९ वटै वडामा पाएको मतलाई आधार मान्ने हो यहाँ कांग्रेसको सबभन्दा धेरै प्रभाव देखिन्छ।
यी सबै वडामा विभिन्न पार्टीबाट उठेका उम्मेदवारहरूले पाएको मत गणना गर्दा कांग्रेसले सबै वडामा गरी ३९ हजार १ सय ९९ पाएको थियो। त्यस्तै एमालेले ३७ हजार १ सय ९५ मत पाएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले २१ हजार २ सय ८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ हजार ८ सय २० मत ल्याएको थियो।
यसको दाँजोमा माओवादीकी रेनु दाहालले मेयरका रूपमा पाएको मत माओवादी केन्द्रको भन्दा दोब्बर अर्थात ४३ हजार १ सय २७ थियो। त्यस्तै एमालेका देवी ज्ञवालीले ४२ हजार ९ सय २४ मत ल्याएका थिए। राप्रपाका बद्री तिमल्सिनाले ६ हजार ८ सय ४२ मत पाएका थिए।
यो तथ्यांक हेर्दा मेयरका सबै उम्मेदवारले आफ्नो पार्टीको तुलनामा मत बढाएका थिए। उनीहरूले बढाएको सबै मत नेपाली कांग्रेसका परम्परागत मतदाताबाट पाएको हो भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ, किनभने कांग्रेसको आफ्नो मेयर उम्मेदवार थिएन। त्यति बेला जति रूष्ट भए पनि बहुसंख्यक कांग्रेसी मत रेनु दाहालकै पक्षमा गएको थियो।
यसपटक पनि कांग्रेसको बहुसंख्यक मत रेनु दाहालको नाममा गयो भने उनले जित्न सक्छिन्। कांग्रेसी मत नगए जित्न कठिन छ।
यो पनिः काठमाडौंको भित्री नेवार बस्तीमा केशव स्थापित, सिर्जना सिंह र बालेन शाहमध्ये को बलियो?